धारिलो हतियार प्रहार गर्ने पक्राउ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
धारिलो हतियार प्रहार गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले धारिलो हतियार प्रहार गर्ने एक जनालाई आज पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा भारत विहारका आनन्द कुमार रहेको छ । उनले काठमाडौँ गौशाला बस्ने सर्लाही हरिवनकी एक महिलालाई खुकुरी प्रहार गरेको वृत्तले जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पूजा सिंहले खुकुरी प्रहारबाट घाइते महिलाको ओम अस्पताल चाबहिलमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए। घटनाका बारेमा थप अनुुुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
चार किलोग्राम चरेससहित एक पक्राउ
महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाको टोलीले चार किलोग्राम चरेससहित आज एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरका श्यामलाल तामाङ रहेको छ । पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ७ ख २६७ नंको यात्रुवाहक बसलाई चेकजाँचका क्रममा उनलाई चार किलोग्राम चरेससहित पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले जनाएको छ ।
प्रभागका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक केशव भट्टले झोलामा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा उक्त चरेस बरामद गरेको जानकारी दिए । पक्राउ परेका तामाङलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट पठाइएको पनि उनले बताए ।